Isamsung yokuHlawula iMini ayidlulisi ukusikwa kwaye ihlale ngaphandle kwe-iOS | Iindaba zeGajethi
Isamsung yokuHlawula iMini ayidlulisi ukusikwa kwaye ishiywe ngaphandle kwe-iOS
Imfazwe phakathi kwenkampani yaseMzantsi Korea i-Samsung kunye ne-American Apple ayikho into entsha. Sonke apha siyalazi idabi eziye zabakho zombini iinkampani kwimbali yazo kwaye ngeli xesha ayisiyiyo enye idabi lelungelo elilodwa lomenzi wechiza okanye efanayo, imalunga Ukungavunywa kuka-Apple kwesixhobo sokuhlawula iMini esihlawulelwayo seSamsung.
Namhlanje sinenye indawo evulekileyo phakathi kweenkampani, iibhanki kunye neenketho zeNFC ngokwazo. Ewe, le yinto eyongeza kwaye yongeza ixabiso kwizixhobo ezikhoyo ezinenkxaso yale ndlela yokuhlawula kwaye i-Samsung ifuna ukufikelela kuzo zonke izixhobo, nokuba ziyahambelana okanye hayi ziyahambelana ngenxa yesicelo seSamsung Pay Mini, isicelo esingazukuphunyezwa kwi-iOS ngezizathu ezicacileyo kwaye iApple inendlela yayo yokuhlawula, iApple Pay.
Ngeli xesha asinakuthi ukubangisana phakathi kwezibonelelo ezimbini zomsebenzisi, kodwa kusengqiqweni ukuba iApple ayisamkeli esi sicelo esisikhumbuza okuninzi okusetyenziswe yiPayPal kolu hlobo lweentlawulo ezikwi-Intanethi. ETNews ibingumntu ophakathi ophetheyo ukusungula ezi ndaba kwaye iqinisekisa ukuba kwenziwe iinzame zokongeza isicelo ukuya kwizihlandlo ezibini, kodwa Xa ujamelene nokwala kuka-Apple, kuya kuphunyezwa kwizixhobo ze-Android.
Embindini wedabi leenkonzo zokuhlawula nge-smartphone, ithebhulethi, izinto zokunxiba kunye nezinye izixhobo ezihambelana neNFC kunye noNxibelelwano olungacaciswanga, kuyacaca ukuba oku akunakuhamba kakuhle nangayiphi na indlela kubantu baseMzantsi Korea. Kwelinye icala ushiye ecaleni iindaba Uhlelo lokusebenza kulindeleke ukuba lusungule kwangoko kwi-2017 ye-Samsung Pay Mini eMzantsi Korea kwaye kancinci kancinci iyaphunyezwa kwamanye amazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Isamsung yokuHlawula iMini ayidlulisi ukusikwa kwaye ishiywe ngaphandle kwe-iOS
Ikhibhodi yeGoogle Gboard isungula izixhobo ze-Android